Dowladda Oo Xirtay Xafiiskii Maamulka Hawada Soomaaliya Ee Magaalada Neirobi – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowladda Oo Xirtay Xafiiskii Maamulka Hawada Soomaaliya Ee Magaalada Neirobi
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay si toos ah ula soo wareegi doonto hawada Dalka oo in muda ah laga maamulayay magaalada Neirobi ee dalkaasi Kenya sida lagu sheegay bayaan ay soosaartay dowlada soomaaliya.
Ururka caalami ahi ee duulista rayidka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo looyaqaan (ICAO) oo hoos taga hay’ada Qaramada Midoobey ayaa inka badan 25 sano maamuleysay hawada Soomaaliya iyadoona dadaal ay ugashay xakuumada Kheyre ay usuura gashay in ay dib ula soo wareegaan hawada Somaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista dowlada federaalka ah ee Soomaaliya Mohamed Abdullahi Salad ayaa sheegay in manta wixii kadambeeya dowlada ay sibuuxda umaamuli doonto hawadeeda oo laga soo bilaabo sanadii 1992 dii ka maqneyd gacanta dowlada isla markaana aad ay ugu mahad celinayaan ururka caalamiga ah ee duulista hawada kaa oo mudadii 25 sano ee lasoo dhaafay si wanagsan umaamulayay hawada Soomaaliya.
“Maanta oo ay taariiqda kubeegan tahay 18 ka june sanada 2018ka waxaan shacabka soomaaliyeed ugu hambal yeyneenaa in dowlada soomaaliya manta wixii kadambeeya ay xur utahay hawada soomaaliya isla markaana laga maamuli doono magaalada muqdisho ayuu yiri wasiirka gaadiidka iyo dulista dowlada federaalka ee soomaaliya mudane Mohamed Abdullahi Salad.
Bishii March aynu kasoo gudubnay waxaa garoonka diyaaradaha ee magalada muqdisho kasoo dageen inka badan 34 duulimaadyo kala duwan kuwaa oo lagu qiimeynayay dhanka hawada iyadoona haatan dowlada si cad ay usheegtay lasoo wareegida hawada Soomaaliya oo mudo dadaal ku bixisay sidii ay gacanta dowlada dib ugu soolaaban laheyd.